Der Spiegel Oo Haya Dukumintiyo Muujinaya In CR7 Uu Bixiyay Lacag Waali Ah Si Uu U Daboolo Kufsi uu Geystay 2009 - Wargane News
Home Sports Der Spiegel Oo Haya Dukumintiyo Muujinaya In CR7 Uu Bixiyay Lacag Waali...
Wargeyska isbuuclaha ah ee Der Spiegel kana soo baxa Jarmalka ayaa Jimcadii ku waramay inuu hayo Dukumintiyo ay ka heleen Football Leaks kaas oo cadeynaya in Cristiano Ronaldo oo haatan 32-jir ah uu kula heshiiyay haweeney aan la magacaabin iney ka aamusto kufsi uu kula kacay xidigaan sanadkii 2009 xilli uu ku sugnaa hotel lagu raaxeysto oo ku yaala Las Vegas, waxaana xusid mudan iney waqtigaas aheyd 20-jir sida warbixinta lagu sheegay.
Sideed sano ka hor ayey aheyd dhacdada hadda xogteeda la helay, waxaana xiligaas Ronaldo oo kaashanaya qareenkiisa ay bixiyeen lacag dhan 375,000 kun oo doolar si loo daboolo kiiska.
Sida lagu sheegay warbixinta iyadoo la xiganayo dukumentiyada xaqiida ah, haweeneyda iyo Ronado oo uu wehliyo qareenkiisa Carlos Osório de Castro ayaa heshiis ku wada gaaray 12-kii January 2010 inaan maxkamadda la aadin, iyadoo heshiiskaan uu ka dhacay xarunta dhex-dhexaadiyaasha Nevada.
Wargeyska wuxuu ka warbixiyay in qareenka de Castro uu ka gaabsado inuu ka hadlo arimahaan muranka dhaliyay, balse waxey warbixinta intaas ku dartay inuu lasoo xiriiray qareenka labaad ee Jarmalka ah Johannes Keiler, kaas oo meesha ka saaray sheegashada macmiilkiisa isagoo ugu baaqay wargeyska inuu arinta isaga haro.
“Eedeymaha dahsoon ee la xiriira su’aalahaaga waa kuwa si adag uga hor imaanay suuragalnimada xaaladda” ayuu yiri sidoo kalana wuxuu ka digay inuu ka falcelin doono wax walba oo aan run aheyn oo dhaawacaya shaqsiyadda qofka uu macmiilka u yahay.
Ugu dambeyntiina marka dib loogu laabto xusuusta dambe sanadkii 2005 ayey soo ifbaxeen warar sheegaya inuu xidigaan reer Portugal xad gudub ku sameeyay haweeney uu kula kulmay qolka ay ka daganeed hotelka Sanderson ee ku yaala magaalada London.